Xuuthiyiinta oo ka dagaalamaya bartamaha Cadan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dagaal xoog leh ayaa ka socda magaalada labaad ee dalka Yemen ee dhacda koofurta dalka ee Cadan.
Dagaalka ayaa ku sii xoogaystay magaalada Cadan, xilli ay fallaagada Xuutiyiinta isku dayayaan inay magaaladaasi kala wareegaan maleeshiyaad maxali ah oo halkaasi ka dagaalamaya, taageersanna madaxweyne Haadi.
Dad goobjoogayaal ah oo ku sugan magaalada Cadan ayaa waxa ay ka warrameen duqeyn xooggan, qoryo diirad leh oo ay maleeshiyaadka la fuuleen guryaha korkooda, iyo meydad daadsan wadooyinka.
Maleeshiyada Xuuthiyiinta oo taageero ka helaya taangiyo ayay u suuragashay iney gudaha u galaana Cadan, inkastoo ay weli la kulmayaan iska caabin adag.
Waxaa jira walaac sii kordhaya oo ku aadan tirada dadka wax ku noqday colaadaasi, xilli fallaagada ay sii wadaan inay horay u socdaan, inkastoo in kabadan todobaad xoogaga Xuutiyiinta lagu hayo duqeymo dhanka cirka ah ee ay wadaan isbaheysiga uu horkacayo Sacuudiga.
Afhayeen milateri oo u hadlay isbaheysiga oo lagu magacaabo Axmed Asiri, ayaa xaqiijiyay inuu socdo dagaal culus.
Ciidamada Isbaheysiga ayaa dhanka badda ka duqeeyey Xuuthiyiinta, hase ahaatee taasi kama joojin iney magaalada kusii durgaan.
Sida muuqata Isbaheysiga Sacuudigu hogaaminayo ayaa ku fashilmay iney hakiyaan is ballaarinta Xuuthiyiinta, kuwaasoo haataan ka dagaallamaya magaalada Cadan.
Wasiirka arrimaha debadda Yemen, Riyaadh Yaasin ayaa sheegay in haddii Cadan gacanta u gasho Xuuthiyiinta ay taasi noqon doonto masiibo ku dhacda dadka magaalada.
Afhayeen u hadlay Xuuthiyiinta, Maxamed Cabdisalaam ayaa u sheegay TV ku hadla afka kooxdiisa, in todobaad kadib duqeynta ay kala kulmayaan Isbaheysiga Sacuudigu uu horkacayo aaney naatiijo ka gaarin kuwa soo duulay.
Dhanka kale tirada dadka ku dhaawacmay dagaalada ka socda dalkaasi ayaa sii kordhaysa. Afhayeen u hadashay dhaqaatiirka aan xuduudda laheyn ayaa sheetay in ilaa 500 oo dhaawac ah lasoo gaarsiiyey isbitaallada ay ku leeyihiin Yemen.